आज सूर्यग्रहणः यी ५ भाग्यशाली राशी हुनेछ ठूलो लाभ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज सूर्यग्रहणः यी ५ भाग्यशाली राशी हुनेछ ठूलो लाभ
एजेन्सी। आज असार कृष्ण औंसी तिथीका दिन सूर्यग्रहण लाग्दैछ । आजको ग्रमण खण्डग्रास हुनेछ र यो नेपालमा देखिने छैन । यद्यपि यो ग्रहणको प्रभाव भने नेपालमा पनि पर्ने ज्यातिषीहरुले बताएका छन् । ग्रहण पुनर्वसु नक्षत्र र हर्षण योगमा हुनेछ । ग्रहण कर्कट लग्न र मिथुन राशीमा लाग्नेछ । ग्रहणका क्रममा सूर्य र चन्द्रमा दुवै मिथुन राशीमा रहनेछन् । यो सूर्यग्रहणमा ५ राशी निकै भाग्यशाली हुनेछन् ।
ग्रहणले मेष राशी हुनेहरुका लागि धेरै खुसी ल्याउनेछ । आर्थिक सम्पन्नताको यो बनेको छ । वैवाहिक जीवनमा ुधार हुनेछ । अचानक कहीँबाट धनलाभको पनि संकेत छ । मिथुन राशीका लागि पनि ग्रहण शुभ छ । यात्राको योग छ । शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्छ । लामो समयदेखि जारी समस्याको समाधान हुन सक्छ । पदोन्नतीको संकेत देखिएको छ ।
ग्रहणमा तुला राशीका लागि सबैभन्दा धेरै फाइदा हुनेछ । आर्थिक मुनाफाको योग छ । परिवारमा खुसीपूर्वक जीवन बित्नेछ । मकर राशीका लागि पनि ग्रहण शुभ छ । काममा सफलता प्राप्त हुने योग छ । बिग्रेका काम बन्नेछन् । सामाजिक मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । राम्रो जागिरका अवसर प्राप्त हुनेछन् । सिंह राशीमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ । समाजमा मान सम्मान वृद्धि हुनेछ । कानुनी विवादमा सफलता प्राप्त हुनेछ र धनलाभ हुनेछ ।